March 2015 – democracy for burma
#KO #LIPE #Government panel to #resolve #land #conflict
On March 31, 2015 By Burma Myanmar newsIn government, KO LIPE, LAND CONFLICT, SEA GYPSIS, THAI SOUTH, ThailandLeaveacomment
A government-appointed panel will visit Lee Peh island off Satun province on April 9-10 to try to work outacompromise settlement on land conflicts between the indigenous Le people and resort operators.
Admiral Surin Pikulthong, head of the panel, told Thai PBS that the conflicts stemmed from the issuance of land certificates by provincial land officials trespassing on the traditional land and even cemetery of the Le islanders or Sea Gypsies.
He said that the Le islanders have been living on their traditional land for over 100 years and they are now facing eviction from the new landowners who are mostly rich and powerful resort operators.
Although half of the island has been declared national park, it is dotted with hotels, resorts, restaurants and tour offices, he said, adding that land is scarce on the island and it now fetches between 10-20 million baht per rai.
About 300 families of the Sea Gypsies who have been evicted from their traditional land are now squeezed into narrow stripe sandwiched by resorts.
Mr Panapol Chivaserichon, the park chief, said that there were three influential land brokers who sold most of land on the island to resort developers and he suspected irregularity in the issuance of land certificates.
It was reported that one land certificate covers eight plots of land.
Meanwhile, some Sea Gypsies said they were forced to sell their land otherwise they safety might be in peril. cr. thaipbs
#THAILAND #KOH #SAMUI #FRENCH #TOURIST #ACCIDENT
On March 31, 2015 March 31, 2015 By Burma Myanmar newsIn FRANCE, KOH SAMUI, ThailandLeaveacomment
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ 2558
รับแจ้งเมื่อ. เวลา 21:20 น.
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ฯ
ร้อยเวร ร.ต.ท ยศกร ทองนุ้น
สภ. บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สฎ
กู้ภัยภารกิจ E29DIV E29VQZ พร้อมสมาชิก
เน็ต.ศูนย์กู้ภัย สฎ : กู้ภัย130
พบเหตุ.ใน จ.สฎ. แจ้ง ได้ที่.
!! #ဒုတိယ #ပင်လုံရဲ့ အောင်ပွဲတစ်ခု”
On March 31, 2015 March 31, 2015 By Burma Myanmar newsIn ငြိမ်းချမ်းရေးတံခါးမှသည် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲသို့, Burma, CEASEFIRE DRAFT, MYANMARLeaveacomment
“ဒုတိယ ပင်လုံရဲ့ အောင်ပွဲတစ်ခု” (ငြိမ်းချမ်းရေးတံခါးမှသည် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲသို့ )
[၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လကုန်မှာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု တံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် (၄)နှစ် တင်းတင်းပြည့်မြောက်တဲ့အချိန်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးတံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။] ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) အချောသတ်မူကြမ်းကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနား၌ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ပြောကြားသော နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ကျွန်တော်တို့ ယခုလိုတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေး အတွက် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း ခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးနှင့် တွေ့ဆုံရသောကြောင့် ကျွန်တော့်အနေဖြင့်များစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက် ကြောင်းဦးစွာ ပထမပြောကြားလိုပါတယ်။ ပိုပြီးဝမ်းသာစရာကောင်းတာကတော့ မနေ့ညက TV ထိုင်ကြည့်နေရင်းနဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များပြောကြားသော ရင်တွင်းစကားများကြားရ သည့်အတွက် အိမ်မပျော်အောင် ၀မ်းသာရပါတယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးသည် ခင်ဗျားတို့၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံး သိကြပြီး ဖြစ်သည့် ပြည်သူများ၏လိုလားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးသည်ပြည်သူ တွေရဲ့ဆန္ဒလည်းဖြစ်ပါတယ်၊ပြည်သူတွေရဲ့ မျှော်မှန်းချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေမျှော်လင့် စောင့်စားနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ယူဆောင်လာသောသူတွေဟာ ဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင် ခင်ဗျားတို့၊ ကျွန်တော်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ အဓိကအကျဆုံးကတော့ ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ NCA စာချုပ်မူကြမ်းကို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါဆွေးနွေးပြီး မနေ့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီစာချုပ်မူကြမ်းကို သဘောတူညီချက် ရရှိပြီဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဒီစာချုပ်မူကြမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီကနေ့မှာတော့ လက်မှတ်ထိုးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသဘောတူညီချက် ဟာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့ အတွက် အဓိကတွန်းအား တစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဧပြီလ အတွင်းမှာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ သေချာပေါက် ဆောင်ရွက် သွားနိုင်တော့မယ် လို့ ပြောလို့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီ NCA လက်မှတ် ရေးထိုးပြီးတာနဲ့ ရှေ့ဆက်သွားမယ့် Political Dialogue အတွက်က တံခါးပေါက် ပွင့်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Political Dialogue ကတော့ အချိန်များစွာယူပြီး ဆွေးနွေးကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ယူကြရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကြားကာလမှာ တွေ့ကြုံရမယ့် ပြဿနာတွေ အခက်အခဲတွေ ဒါတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ရင်ဆိုင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြားကာလမှာ တွေ့ဆုံရမယ့် အခက်အခဲတွေ၊ ပြဿနာတွေ၊ Challenges တွေ ဒါတွေကတော့ အခုလိုပဲ မျက်နှာစုံညီ ညှိနိုင်းရင်း၊ ဆွေးနွေးရင်း၊ အဖြေရှာရင်းနဲ့ ကျော်လွှားသွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာကတော့ ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ သမိုင်းကို ခင်ဗျားတို့တွေဟာ ဖော်ဆောင်ပေးတဲ့ သူတွေတင် မကပါဘူး။ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ သူတွေ အဖြစ်နဲ့ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ကြမယ့်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု အတွက် တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်တဲ့ အောင်မြင်မှု တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒုတိယ ပင်လုံရဲ့ အောင်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံး ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်။ ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးပါစေလို့လည်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်။
#crime #‎คนร้ายลอบวางระเบิด‬ (ใส่ในถังขยะ) #รือเสาะ #นราธิวาส ‪#‎บาดเจ็บเล็กน้อย‬
On March 31, 2015 March 31, 2015 By Burma Myanmar newsIn BOMB, CRIME, narathiwat, THAI SOUTHLeaveacomment
Two police officers were injured inaroadside bomb explosion in Ruesor district of Narathiwat province this morning.
The two officers identified as Lance Corporals Hasan Poji and Yutaporn Silabutr. Both were admitted to Ruesor hospital.
The roadside bomb was detonated as the two officers were onapatrol on the road in front ofapetrol station, about 400 metres off Ruesor police station.
Explosive Ordnance Disposal team arrived this morning to inspect the scene and sealed the area for clearance if there was still any bomb left behind to harm the EOD police.
‪#‎คนร้ายลอบวางระเบิด‬ (ใส่ในถังขยะ) อ.รือเสาะ นราธิวาส ‪#‎บาดเจ็บเล็กน้อย‬
(30 มีค.) เมื่อเวลาประมาณ 21.20 น. ได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายจำนวนลอบวางระเบิด จนท.ตร.ชุด ชป.ป้องกัน ฉก.นปพ.นธ.21 สถานที่เกิดเหตุ ข้างปั้มน้ำมันบางจาก บ.ปลายนา ม.2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ผู้บาดเจ็บส่ง รพ.รือเสาะ แล้วทราบชื่อ
1.ส.ต.ต.ฮาซัน เปาะจิ มีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดที่แก้มเล็กน้อย
2.นายยุทธพร ศีละบุตร มีบาดแผลที่ข้างหูซ้าย
3.ด.ญ.ธิดารัตน์ ถึงมณี อายุ 12 ปี (ตกใจไม่มีบาดแผล)
4.ด.ญ.เปรมมิกา ต่วนปูเต๊ะ อายุ11 ปี (ตกใจไม่มีบาดแผล)
รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป !!! CR. CATHAY MEE
#update #တာချီလိတ်၌ ပျောက်သွားသည့် (၆)နှစ်အရွယ် #မိန်းကလေး #(၄)ရက်မြောက်မှာ အသေတွေ့ရ
On March 30, 2015 April 1, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MYANMAR, ThailandLeaveacomment
photocr.maesai news online
ပျောက်ဆုံးပြီး အသတ်ခံလိုက်ရသည့် ကလေးငယ်၏ ရုပ်အလောင်းအား ထိုင်းဘက်မှ တဆင့် တာချီလိတ်သို့ ပြန်လည်သယ်ဆောင်
တာချီလိတ်မြို့တွင် မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ပျောက်သွားသည့် အသက်(၆)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦးအား (၄)ရက်မြောက်ဖြစ်သည့် ယနေ့ မတ်လ(၃၀)ရက် ညနေပိုင်းက ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အလောင်းအား ထိုင်းနိုင်ငံဘက်တွင် စစ်ဆေးရာမှ ယနေ့ မတ်လ(၃၁)ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် တာချီလိတ်မြို့သို့ ပြန်လည်၍ သယ်ဆောင်လာပြီး တာချီလိတ်၌ လူပျောက်မှုမှ တဆင့် လူသတ်မှုအဖြစ် အမှုဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် အတွက် ဆေးစစ်ချက်ရယူရန် တာချီလိတ် ဆေးရုံတွင် ဆက်လက် စစ်ဆေးနေလျက်ရှိသည်။
တာချီလိတ်မြို့တွင် မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ပျောက်သွားသည့် အသက်(၆)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦးအား (၄)ရက်မြောက်ဖြစ်သည့် ယနေ့ မတ်လ(၃၀)ရက် ညနေပိုင်းက ပြန်လည်တွေ့ရှိရသော်လည်း သေဆုံးနေကြောင်း သိရသည်။ အသက်(၆)နှစ်ရှိ မနန်းဖွေးဟွမ်သည် တာချီလိတ်မြို့၊ မကာဟိုခမ်းရပ်ကွက် အိမ်အမှတ် (၂/၁၇၈)နေတွင် မတ်လ(၂၇)ရက် ည(၇း၃၀)နာရီ အချိန်က ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၎င်းပျောက်နေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မိသားစုဝင်များမှ ကလေးအား အပူတပြင်းရှာဖွေခဲ့ကြပေမဲ့လည်း (၄)ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်သည့် ယနေ့ မတ်လ(၃၀)ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ ထိုင်း – မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်အကြားရှိ မယ်ဆိုင်ချောင်း ထိုင်းဘက်ကမ်းတွင် သေဆုံးနေလျက်ဖြင့် တွေ့ရှိရသည်။ “ကလေးရဲ့ လည်ပင်းမှာ ကြိုးချည်ထားတာကို တွေ့ရတယ်၊ သူ့ရဲ့အလောင်းကို အိတ်နဲ့ထည့်ပြီး ချောင်းမှာလာပစ်ထားတဲ့ သဘောပဲ၊ ကလေးအလောင်းထည့်ထားတဲ့ အထုပ်ကို ချောင်းမှာ ရေကစားနေတဲ့ ကလေးတွေက တွေ့တာ..”ဟု အလောင်းအား မယ်ဆိုင်ဆေးရုံသို့ သယ်ဆောင်ပေးသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ တာချီလိတ်အွန်လိုင်းသို့ ပြောပြသည်။ “ကလေးရဲ့အလောင်းကို မြန်မာဘက် ကမ်းမှာ တွေ့တာမဟုတ်ဘဲ ထိုင်းဖက်ကမ်းမှာ တွေ့တာဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မယ်ဆိုင်ရဲကလည်း စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့လည်း မယ်ဆိုင်ချောင်းကနေ မယ်ဆိုင်ဆေးရုံမှာ ပို့ပေးထားခဲ့ပါတယ်..”ဟု အဆိုပါအဖွဲ့မှ ပြောပြသည်။ ကလေးအလောင်းအား စတင်တွေ့ရှိရာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တာချီလိတ်မြို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ အပါအ၀င် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်ခြားကော်မတီမှ သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ကြပြီးနောက် မယ်ဆိုင်ဆေးရုံသို့ သေဆုံးသူ၏ မိသားစုဝင်များနှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံမယ်ဆိုင်မြို့ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ (CNCMC)၀င်များ မှလည်း သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။
#update #เด็ก #พม่า #หาย #พบ #กลายเป็นศพลอยน้ำสาย
On March 30, 2015 April 1, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, missing girl, MYANMAR, ThailandLeaveacomment
UPDATE MAESAI NEWS
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.20 น. ทางทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์ ได้ลงพื้นที่ไปยัง ฝั่งประเทศเมียนม่าร์ เพื่อเกาะติดเหตุการณ์ น้อง บี (นามสมุติ) ที่ได้ถูกคนร้ายลักพาตัวจนถูกทำร้ายจนเสียชีวิตทิ้งศพลอยน้ำมาติดตรงที่ท่ากระหล่ำ ซึ่งศพน้อง บี ได้นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพระเจ้าระแข่ง
จากการสัมภาษณ์ญาติของเหยื่อผู้เสียชีวิตได้ข้อมูลมาว่า พ่อกับแม่ของ น้อง บี นั้นได้แยกทางกันตั้งแต่ น้องบี อายุได้3ขวบ มีแต่ตากับยายเท่านั้นที่ดูแลน้อง ซึ่งน้องบี นั้นได้อาศัยอยู่บ้านเลขที่4/187บ้านมะก๋าหัวคำ จ.ท่าขี้เหล็ก จนมาถูกคนร้ายทำให้เสียชีวิตไปอย่างน่าสลดใจทั้งๆที่ตอนนี้ยังไม่พบเบาะแสของฆาตรกรใจโหด
ทีมข่าวจึงขอแจ้งผ่านว่าศพของน้องจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพระเจ้าระเเข่ง และจะทำการฌาปณกิจศพ ในวันที่2เมษายน 2558 ในเวลา 13.00 น.
update tachilek news
เด็กพม่าหาย พบกลายเป็นศพลอยน้ำสาย เมื่อเวลา 18.20น.วันนี้(30มีนาคม) รตอ.จักรพงษ์ ศรีวาณิชย์กุล พนักงานสอบสวนเวร สภ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งว่ามีผู้พบศพในถุงกระสอบฟาง อยู่ริมแม่น้ำสาย ในเขตบ้านเหมืองแดง หมู่ที่13 ตำบลแม่สาย ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์แห่งที่2 ไม่มากนัก จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จากนั้นประสานชุดกู้ภัยเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ พบศพเด็กเพศหญิง อายุประมาณ 7ขวด อยู่ในถุงกระสอบฟางสีเขียว สภาพร่างกายบวมอืด คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 24ชั่วโมง ที่บริเวณลำคอมีลวดรัดอยู่ โดยก่อนหน้ามีการแชร์กันในเฟสบุ๊คในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ทางด้านอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กรณีเด็กหญิงชาวไทใหญ่สัญชาติพม่า อายุประมาณ 7ปี ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ที่บ้านสันทรายไต เมืองท่าขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 27มีนาคม โดยนายยี่ ซึ่งเป็นปู่ของเด็กได้ประกาศจะมอบรางวัลให้ 50,000บาท หากว่ามีใครแจ้งเบาะแสจนพบเด็ก เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานให้นายยี่ ปู่ของเด็กมาตรวจสอบ ว่าใช่เด็กที่สูญหายไปหรือไม่ ซึ่งเมื่อนายยี่มาพบศพ ได้ยืนยันว่าเป็นหลายสาวที่หายไปจริงๆ พร้อมเล่าให้ฟังว่า เด็กหายไปตั้งแต่วันที่ 27มีนาคม เวลาประมาณ 19.00น. โดยผู้ที่ลักพาตัวไปคาดว่าน่าจะเป็นขี้ยาซึ่งมีอยู่เยอะ แต่ว่าไม่ทราบว่าลักพาตัวไปทำไม เบื้องต้นหลังจากบันทึกหลักฐานแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ให้ชุดกู้ภัยนำศพส่งไปที่โรงพยาบาลแม่สาย เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการตายที่แท้จริง โดยเมื่อทราบแล้วก็จะได้มอบศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไป ชมรมเฝ้าระวังภัยแม่สาย
On March 30, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, KOKANG, MYANMAR, RED CROSSLeaveacomment